Chọta Center nke ike ndọda maka Nnukwu Ihe Ngosi | Martech Zone
Onye ọ bụla maara na PowerPoint bụ asụsụ azụmahịa. Nsogbu bụ, ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri PowerPoint abụghị naanị ihe nkiri slide ndị a na-ebufe ma na-agbagwoju anya na-eso ndị na-eme ihe ngosi na-ewebata ụra.
Ebe anyị mepụtara ọtụtụ puku nkwupụta, anyị achọpụtala omume kacha mma dị mfe, mana anaghị arụ ọrụ. Iji mezuo nke ahụ, anyị kere Center nke ike ndọda, usoro ohuru maka ihe ngosi ulo. Echiche bụ na oche ọ bụla, slide ọ bụla, na ọdịnaya ọ bụla dị n’ime oche chọrọ ebe dị mkpa. Iji mee nke a, mmadụ kwesịrị iche echiche banyere ihe ngosi sitere na isi ihe atọ: (1) nnukwu, ngosipụta sara mbara, (2) slide-by-slide, na (3) na ọkwa granular, ebe mpempe data ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla n'ime nke ọ bụla eji nlezianya tụlee slide.
Were Ele Macro
Iji malite, chee echiche banyere ihe ngosi site na ihu igwe, na-ele ihe ngosi gị anya. Kedu ihe bụ isi okwu gị, nke na - eme ka oche ahụ nwee njikọ ma mee ka ọ pụta ìhè na ebumnuche gị? Mgbe ahụ gaa otu ọkwa dị omimi. Ihe ngosi ọ bụla ga-ama ụma gaa n'ihu ebumnuche ụgbọ mmiri ahụ. Ọ bụrụ na o meghị nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịjụ, gịnị bụ nzube slide ahụ? Olee otú ọ dabara na nnukwu foto nke ngosi?
Ọzọkwa, slide ọ bụla ga-enwe Centerlọ Ọrụ nke nnukwu mpo, ebe a na-elekwasị anya na-ejikọ ya, na-enye ya nguzozi na ịdị n'otu. Na ikpe azu, bugharia n’ebe di nso nke ọdịnaya obula obula. Nyochaa paragraf nke ọ bụla, eserese ọ bụla, isi okwu ọ bụla. Ihe obula, okpokoro ma obu eserese kwesiri ikwu okwu banyere ihe ngosi, mana choro isi okwu ya.
Ka m jiri ihe atụ maa atụ. Were usoro mbara igwe anyị. Anyanwụ bụ isi ihe dị na mbara igwe ma na-adọta ikike ndọda na mbara ụwa ọ bụla. Otú ọ dị, mbara ala nke ọ bụla nwere ikike ndọda ya. N’otu aka ahụ, slide nke ọ bụla, na ihe ọ bụla dị n’ime slide ọ bụla, ga-agarịrị etiti nnukwu ndọda okwu (ya bụ, anyanwụ). Kaosinadị, dị ka mbara ala ndị dị na mbara igwe anyị, slide nke ọ bụla na ihe ọ bụla dị na slide ọ bụla ga-enwerịrị nke ọ bụla na-elekwasị anya, nke na-eme ka ọ dabere ma na-agakọ.
Ka anyị nyochaa ụfọdụ azum na ụzọ iji hụ na a na-elekwasị anya na ọkwa ọ bụla.
Tụlee akụ gị n'ozuzu
Okwu gi n'ozuzu ya kwesiri inwe otu nnukwu echiche, isi okwu ma obu ebumnuche. Ọ dị mkpa inwe otu nzube. Decklọ a ọ na-ere ọrụ gị, echiche gị, nyocha gị? Ọ bụrụ otu a, chọpụta ihe ị na-ere. N'aka nke ọzọ, oche gị bụ naanị ịkekọrịta ọrụ gị, na-ezi ozi na-enweghị mkpa ime ka ndị na-ege ntị mee ihe. Ọ bụrụ na ị na -ekekọrịta, kedụ ihe ị chọrọ ka ndị na-ege ntị wepụrụ n’ihe ngosi ahụ?
Tụlee Ndị Na-ege Ntị
Ọzọ, tụlee ndị na-ege ntị. N'elu oke igwe, chee echiche banyere ihe ndi na - ege gi nti, ma obu ndi ahia, njikwa, ma obu ndi sara mbara. Otutu ihe omuma adighi edozi nke oma maka mkpa ndi na-ege nti. Kama nke ahụ, a na-ewu ha site na ndị na-ekwu okwu, mana ọ dị mkpa ịkewaa ndị na-ege gị ntị wee wuo akụkọ gị gburugburu ha. Gịnị mere ha ji nọrọ ebe a? Kedu ọkwa ọrụ ha na ọrụ ha? Ego ole ha nwere maka nkọwapụta granular, acronyms, ihe ndị ọzọ? Gịnị bụ nchekasị ọrụ ha, oku ha na-eme? Hà bụ ndị ekwe ekwe ma ọ bụ ndị kwere ekwe? Kedu ụdị nkwụsi ike ị ga-eche ihu? Azịza ga-enyere etiti otu ị ga - esi wuo oche gị. Na-echebara ndị na-ege gị ntị echiche nke ọma tupu iwu okwu giga - enyere aka bulite mmetụta ya.
N'ikpeazụ, tụlee ịdị n'otu. Laghachite ma lelee dum site na nhazi na ịkọ akụkọ. Nke mbu, wu akuko akuko. Ihe ngosi abughi usoro nke echiche a kwusi, ihe data ma obu ihe nlere anya, kama obu uzo kachasi nke otutu ihe omuma. Ngosipụta ngosi bụ ịdọ aka ná ntị nke na-agwakọta okwu, vidiyo, ihe nkiri, data, mgbasa ozi ọ bụla a pụrụ ichetụ n'echiche.
Ulo obula achoro akuko akuko; mbido, etiti, na ngwụcha, ka ị na-agbasa echiche dị nkenke na ngalaba na ngalaba. Ka isi okwu dị mgbagwoju anya, otú ahụ ka a na-achọkwu nhazi. Mmadu choro ijide aka na echiche ndi mmadu, meputa ochichi na usoro. M na-amalite site na ịkọwapụta, nke na-ewuli usoro nhazi site na nkọwa, wee gaa na ịkọwa akụkọ (ya bụ, ihe dịka itoolu ma ọ bụ 12 na mpempe akwụkwọ), wee mee eserese siri ike, na-enweghị nkọwa. Usoro a bụ ụzọ isi were ihe ọmụma dị mgbagwoju anya ma wuo akụkọ ọhụụ. Site n'iji nchịkọta na ịkọwapụta akụkọ na nsonaazụ, nsonaazụ ya ga-abụ usoro akụkọ ahaziri ahazi na usoro ndị isi.
A bịa na usoro imepụta ihe dị mfe, iwu kachasị bụrụ nke ị ga - eso iji wulite njikọta n'ofe oche gị bụ ịmelata mmegharị na ntụgharị. N'ezie, igbochi mmegharị niile iji gbanwee ntụgharị bụ ezigbo usoro isi mkpịsị aka. Ọ gwụla ma ị bụ onye nrụpụta nka ma ọ bụ ihe nkiri, ị kwesịrị ịnọpụ na mmemme PPT na ntụgharị. Nke ahụ kwuru, ịda mbà na-eme nnukwu ihe maka ngosi n'ihi na ha dị mfe, nke a na-ejikarị na fim, mana ọ bụghị cheesy
Abụọ na-esote ụzọ metụtara fon. Gbalịa ịrapara n'ezinụlọ font abụọ na ngosipụta: otu maka isiokwu na aha, onye ọzọ maka ihe ọ bụla (gụnyere ndepụta okwu na oyiri anụ ahụ). Kasị mma, jiri otu font ezinụlọ mana ịdị iche iche nke ịdị arọ (wdg., Nkwuwa okwu maka isi na aha, mgbe niile ma ọ bụ ọkụ maka ahụ oyiri na ndepụta okwu). M na-ejikarị Franklin Gothic eme ihe, nke bụ akwụkwọ edemede mara mma. Calibri bụ nhọrọ dị mma maka nnomi ahụ na ogologo ederede, ebe ọ bụ obere akara ederede na-echekwa ohere, ebe ọ dị mfe ịrụ ọrụ.
Ihe ọzọ ha na-eme bụ ụcha ya. N'ihe banyere agba agba, na-ejikarị otu agba n'ogologo, ma ọ bụ ndo nke otu agba, nke ọma na oji / isi awọ. Might nwere ike ịsị na ọ na-agwụ ike, mana eziokwu bụ na mmasiri anya na-enweta site na nuance n'iji mkpụrụ akwụkwọ, ọ bụghị n'egwurugwu ederede mara mma. Nleta anya na-esite na nchịkwa, foto ma ọ bụ data. Yabụ rapara na otu mkpụrụ edemede ma ọ bụ abụọ, ma belata ojiji agba. Kwesịrị iji otu agba maka ụdị ahụ niile, yana onyunyo dị iche iche nke otu agba iji mepụta ọkwa.
Nke ọ bụla slide, Aococ Point
Anyị na-ele anya na oche ụwa; ugbu a, anyị ga-ekpuchi ihe ngosi ọ bụla. Kedụ ka ị ga-esi were slide? Olee otu ị ga - esi hụ na nke ọ bụla nwere etiti nnukwu ndọda na nke ọ bụla? Ọzọkwa, slide ọ bụla ga-aga n'ihu ebumnuche nke oche ahụ. Ọ bụrụ na o meghị, gịnị kpatara ya? Agbanyeghị, slide ọ bụla chọkwara isi ebe ọhụụ. Ekwesịrị inwe ndị isi, nhazi na ihe ngosi iji mee ka ihe ngosi nke onye ọ bụla doo anya, ebe ịkọwapụta ozi dị mkpa karịa nke na-adịchaghị mkpa.
Dị ka ọkwa ndị ọzọ, enwere usoro iji were n'ọrụ na slide. Ihe omuma a na-eji eme ihe eji eme ihe bu iji gosiputa otu echiche. Nsogbu bụ, nke ahụ abụghị mgbe niile pragmatic. Otu echiche kwa slide bụ ụzọ dị egwu maka okwu TED, mana ọ naghị arụ ọrụ oge niile maka ngosipụta ụlọ ọrụ kwa ụbọchị, n'ezie ọ bụghị maka nyocha ma ọ bụ ngosipụta dị mgbagwoju anya na ọtụtụ data.
N'ọtụtụ ihe ngosi ụlọ ọrụ, "ihe nkiri slide" bụ ihe a na-apụghị izere ezere. Ihe ngwọta ya bụ nhazi usoro na ndị isi, yabụ kama ilekwasị anya n'otu echiche site na slide, usoro kwesịrị ekwesị kwesịrị ịdị otu echiche n’oge nke ọ bụla n’ime oge. Nwere ike inwe ọtụtụ echiche dịka ọ dị mkpa na slide enyere, yana ọtụtụ ozi, mana isi okwu bụ ijikwa uche ndị na-ege ntị n'oge ọ bụla n'oge. Nke a bụ maka ịkọwapụta ezigbo njikọ dị n'etiti visuals na okwu ọnụ, iji jide n'aka na ndị na-ege ntị enweghị mgbagwoju anya. Visuals na okwu kwesịrị jikọọ n'ụzọ doro anya mgbe niile.
Tactzọ ọzọ - mfe. Ma eleghị anya, ọ bụ ntakịrị ihe na-achọsi ike, mana ịdị ọcha dị jụụ. Nchịkọta na edezi na -emepụta ịdị mfe. Ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ, mkparị ahụ ga-abụ ibelata na itinye obere karịa karịa na slide ọ bụla.
Na-esote, tụlee oghere na-adịghị mma nke gbara akụkụ Akwụkwọ Nsọ, eserese ma ọ bụ eserese gburugburu. Oghere na-adịghị mma na-enyere aka ịkọwapụta oke na slide na ihe oyiyi, ma mepụta nguzozi. Nke a bụ a aghụghọ echiche, ma ọ na-agbakwunye ọkaibe na slide imewe. Chọrọ ụfọdụ adịghị mma ohere ma ọ bụghị nke ukwuu; ọ bụ nguzozi nke na-ewe echiche na omume. Gbalịsie ike iji nweta nguzozi, ihe ngosi ahụ ga-enwe usoro na nghọta doro anya.
Osimiri bụ atụmatụ ọzọ eji akọ arụ. Ọ bụ mmadụ ole na ole na-adịghị echepụta ihe ngosi maka ibi ndụ na-elekwasị anya n’ichebe oke gburugburu gburugburu, n’elu, aka ekpe na aka nri. Dị ka m si ele ihe anya, akụkụ dị iche iche so n’ihe ndị kacha mkpa eji emepụta ihe. Gbalịsie ike ichekwa oke oge niile, ọbụlagodi na ọ pụtara eserese, ederede, foto na ihe ndị ga-eme ka ha dabaa ma chekwaa oke n'akụkụ ya.
N'ikpeazụ, tụlee ederede - anyị tụlere ihe ngosi mmịfe, na ịdị mfe, mana nke bụ eziokwu bụ na ị ga-eche mgbidi okwu nke ederede edegoro oke. Olee otu ị ga - esi jiri mgbidi rụpụta ụlọ ọrụ nchịkwa? Jiri ederede oge. Oge ọ bụla ị nwere nnukwu ederede, tụlee iji isi okwu dị mkpụmkpụ na-achikota isi mmalite dị na ntụgharị. Ma dobe isi okwu site na ikwuwa okwu ederede, na-eme ka o buru ibu na / ma ọ bụ mee ka mkpụrụedemede ahụ dị oji karịa ka ọ gafere.
Ikpeazụ Ma Ọ Dịkarịa ala, Lelee n'ime Mgbapu nke ọ bụla
Ọkwa ikpeazụ nke mbugharị na-elele ihe ọ bụla (yabụ, eserese ọ bụla, paragraf nke ederede, onyonyo, wdg) n'ime slide ọ bụla. N'ihe banyere data, eserese ọ bụla, tebụl na eserese kwesịrị ịkọ kpọmkwem na Center Gravity. Jiri nlezianya tụlee wepụ data ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ naghị eme ka ebumnuche ngosi ahụ pụta. Nke ahụ kwuru, chaatị ọ bụla, okpokoro na eserese chọrọ nlebara anya ya, nguzozi na usoro ndị isi na-adọta ya.
Nke mbụ, kweta na data ahụ bụ nwa gị. You na-etinye ọtụtụ awa na ego iji mepụta data na nyocha gị, ma ịchọrọ ịkekọrịta ya. Nsogbu bụ, ọ dịghị onye na-eche banyere ihe dị ukwuu banyere nwa gị (n'agbanyeghị ole foto ụmụaka ị kesara), ọ dịghịkwa onye na-eche banyere ihe gbasara data gị. Mgbe ha na-ewepụta ọrụ ha, ọtụtụ mmadụ na-ekpuchi data maka na ha achọghị iduhie ma ọ bụ ghahie, ma nke kachasị mkpa bụ na ha achọghị ịhapụ ihe ọ bụla dị mkpa. Nke ahụ kwuru, tụlee isi ihe dị mkpa dị ka ọrụ gị dị ka onye na-eweta okwu bụ mmeju, na-enye ihe ọmụma nghọta karịa ị lie ndị na-ege ntị na ya.
Iche iche, nhazi data na-eji otu ngwaọrụ dị ka ihe ngosi mmịfe. Jiri agba kwesiri ekwesi. Ojiji zuru oke nke oghere na-adịghị mma na-emepụta usoro. Na njedebe nke ụbọchị, data kwesịrị ịbụ dike, isi ihe data kachasị mkpa kwesịrị ịpụta. Bibie ihe na-enweghị isi na aha, ihe nrịba akara, ahịrị na akụkọ ifo. Bibie mgbịrịgba na whistist ndị na-eme ka ọgba aghara na mgbagwoju anya. Chọọ akụkọ a na data ahụ, ma ekpuchikwala ya.
Iji kpoo nnukwu atụmatụ data n'ime ndepụta ndepụta, enwere ihe atọ dị mkpa. Ihe data kwesiri ibu:
Nke mbụ, data kwesịrị ịdị mfe nwere ike ịnweta na ezi. Axes na ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị a na-ahụ anya, ihe ntụchi na ahịrị kwesịrị ka ọ dị mma. Nlere anya nke oma kwesiri igosi data. Ndị isi ọhụụ kwesịrị ekwesị kwesịrị ịme data dị ka dike, na-enweghị mgbịrịgba na fịfụ.
Nke abuo, bu data gi nwere nghọta? Data kwesiri ịkọ akụkọ ma jikọọ na isiokwu ngosipụta niile. Ọ bụrụ na enweghị ihe na-atọ ụtọ gbasara data ahụ, tụlee wepụ ya. Nwee echiche maka ịbawanye etu data siri dị, maka na, karịa, karịa ka ọ na-esiri ike ịkọwapụta nghọta.
Nke ato, bu data mara mma, mara mma? You na-eji agba dị ka ngwá ọrụ na nzube? Nlere anya data ahụ ọ dị mfe dị ka o kwere mee? Enwere ahịrị ederede, ederede na ọdịdị ebe achọrọ? Enwere ohere zuru oke?
Mgbe ị na-ekepụta ihe ngosi ọ bụla, tụlee otu esi eme ya na ọkwa atọ nke mbugharị. Na ọkwa nke ọ bụla, tụlee otu esi ejikọ ya na Center Gravity. Ma n'otu oge ahụ, ọ ga-enwerịrị ebe nlebara anya nke na-ejikọ ọnụ. Gbado anya na ọkwa atọ a na ngosi gị ga-ebu ụbọchị.
Tags: data eseresechaatị dị iche ichedatakeynotekeynote imewepowerpointimepụta ikike ebe ikeikike slidengosingosi imewe
Ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịhụ weebụsaịtị gị